Hay’adda FBI ee Maraykanka oo ka digtey weerarro argagixiso oo ka soo fool leh Yeman | Salaan Media
Home Wararka Hay’adda FBI ee Maraykanka oo ka digtey weerarro argagixiso oo ka soo...
Hay’adda FBI ee Maraykanka oo ka digtey weerarro argagixiso oo ka soo fool leh Yeman
Ka dib kulan dalka Mareynkanka ay ku yeesheen Mas’uuliyiinta hay’ada Sirdoonka Mareynkanka ayaa waxay kaga hadleen amaanka dalkaasi iyo sidii looga hortagi lahaa qataraha dhanka amaanka ee kaga imaanaya Kooxaha Al-Qaa’ida xariirka la leh gaar ahaan Al-shabaab.
Kulanka ayaa waxa ka qeyb galay agaasimaha Hay’ada Sirdoonka gudaha Mareynkanka James R. Clapper oo sheegay in dhawaanahan dalkaasi ay ku badanyeen Cabsida dhanka amaanka ah ee ku aadan hanjabaad kaga imaaneysa Al-shabaab Sida uu sheegay.
Wuxuu sheegay Mr Clapper in cabsida ku wajahan dhanka amaanka ee soo food saartay Mareynkanka ay tahay mid sii korortay maalmahii u danbeeyay, ka dib markii Kooxaha jihaadiyiinta uu ula jeeday Al-shabaab hanjabaado ay u marinayeen Barta internetka, isagoona dhanka kale sheegay in kaliya Mareynkanka aysan ku koobneyn oo dhamaan reer galbeed ay wajahayaan cabsi taa lamid ah.
James R. Clapper ayaa hadalkaasi ku sheegay Warbixin uu siiyay Guddiga Senate-ka Maraykanka u qaabilsan Arrimaha Sirdoonka, oo kulan qaas ah ka yeeshay Ammaanka Maraykanka.
Mas’uulkaasi ayaa waxa uu tilmaamay inay jiraan cabsi badan oo Caalami ah, isagoona xusay inay Khataro ay kaga soo fool leedahay Kooxaha Jihaadiyiinta, isagoona tilmaamay in xogtaasi ay ka ogaadeen Aalada internetka.
Mar uu ka hadlayay Kooxaha loogu yeero Argagixisada Caalamiga ayaa waxa uu sheegay inay korortay cabsidooda tan iyo wixii ka dambeeyay kacdoonkii Carabta.
Sidoo kale Mareynkanka ayaa hoosta ka xariiqay in Kooxahani Qatar ay ku yihiin Geeska Africa.
Ugu dambeyn Agaasimmaha hay’ada Sirdoonka gudaha Mareynkanka James R, Clapper ayaa waxa uu tibaaxay in Al-shabaab ay qorsheynayaan weeraro ka dhan ah danaha Mareynkanka iyo guud ahaan wadamada Reer galbeedka, isagoona hay’adaha amaanka Mareynkanka ugu baaqay inay ka feejignaadaan waxyaabaha carqaladeynaya amaanka.